ရွာသူမိတ်ဆက် နောက်ဆက်တွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ရွာသူမိတ်ဆက် နောက်ဆက်တွဲ
Posted by Crystalline on May 17, 2012 in Drama, Essays.. | 24 comments
MG ၇ွာထဲကိုရောက်ရောက်ချင်းပဲ ကြိုဆိုကြတဲ့အတွက် အားလုံးကိုအထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ ညီမရဲ့ကံမကောင်းပုံကတော့ MG ထဲကို မှတ်ပုံတင်ပြီးဝင်တဲ့နေ့မှာ ပဲ connection ကတော်တော်လေးဆိုးနေတယ်။ မိတ်ဆက်စာတင်တော့ တင်နေရင်းနဲ့ network error ဆိုပြီးလိုင်းကျသွားတယ်။ အဲဒါညီမကလည်းဖြစ်နေကျပြသနာဆိုတော့ ပြန် refresh လုပ်ပြီးထပ်တင်တာပေါ့။ အဲဒါ ပို့စ်ကနှစ်ခါထပ်သွားတယ်။ ပြန်လည်းမဖျက်တတ်ဘူး။ G-mail သုံးရင်လည်းအဲဒီလိုလိုင်းကျတာမကြာခဏဖြစ်တယ်။ အရင်ကတော့စာတွေအများကြီးရိုက်ပြီးမှဖြစ်ရင်ဒေါသတွေထွက်တာပေါ့။ နောက်ပိုင်းကျတော့ စာတွေရိုက်ပြီးပြီဆိုရင် ကော်ပီလုပ်ပြီး အရင်သိမ်းထားရတယ်။ နောက်ပြီးအကုန် select မှတ် Ctrl+C အဆင်သင့်ပြင်ထားတယ်။ “Your message have been sent” ဆိုတဲ့စာကြောင်းပေါ် မလာမချင်းဆက်ပို့ပဲ။
ညီမက အင်တာနက်ကိုပုံမှန်သုံးဖြစ်ပေမယ့် website တွေကို တော်ရုံဝင်မကြည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ တချို့ site တွေကို ၀င်ကြည့်ပြီးနောက် ဒေါသချောင်းချောင်း ထွက်ပြီးပြန်ထွက်လာရတာတွေလည်းရှိတယ်။ ဥပမာ Myanmar Exp; တို့လိုပေါ့။ ဒါပေမယ့် MG နဲ့တွေ့တော့ စိတ်ထဲပေါ့ပါးသလိုခံစားရတယ်။ ငြင်းကြခုန်ကြတဲ့အခါလည်းသူတို့နဲ့ အတူလိုက်ပြီးစဉ်းစားပြီး ဘယ်သူပြောတာမှန်တယ် မှားတယ် ဆန်းစစ်ဝေဖန်ပေး၊ ပျော်စရာအကြောင်းလေးတွေ ဟာသ၊ သရော်စာတွေဖတ်တဲ့အခါမှာ တော့ စိတ်ညစ်စရာရှိနေတဲ့အချိန်မှာတောင် အကုန်မေ့စေတယ်၊ ဗဟုသုတတွေကျတော့လည်း မှတ်သားလေ့လာပြီး သိမ်းထားသင့်တာလေးတွေကျတော့လည်း သိမ်းထားတာပေါ့နော်။ ဟင်းချက်နည်းတွေကျတော့လည်း အစားမက်တဲ့သူဆိုတော့ မချက်ဖူးတာ မလုပ်တတ်တာတွေဆို စုထားပြီး စိတ်ပါတဲ့နေ့ချက်စားကြည့်တယ်။ ခရီးသွားမှတ်တမ်းလေးတွေ ဓါတ်ပုံလေးတွေတွေ့ပြန်တော့လည်း ခရီးသွားတာကိုဝါသနာပါတဲ့သူဆိုတော့ စိတ်ဝင်တစားဖတ်မိတယ်။ ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့တကွတင်ထားတာတွေ့ပြန်တော့လည်း ကိုယ်အဲဒီလိုမလုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက် နောင်တရတယ်။ ကျမသွားခဲ့တဲ့ခရီးသွားအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုလည်း အခါအခွင့်သင့်ရင်ဝေမျှပါအုန်းမယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်းပုံလေး တွေ အလှအပဓါတ်ပုံလေးတွေကိုလည်း စုဆောင်းထားမိတယ်။ ရေးသားသူကိုမမှတ်မိပေမယ့် exchange နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပေးတဲ့ g-talk address လေးကတော့ကျမအတွက် သိပ်ကိုအသုံးဝင်တယ် ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဝေငှဖြစ်တယ်။ တခါကတော့ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းသုပ်ကိုလက်တဲ့စမ်းမိတာ ဘာမှားသွားလည်းမသိပဲ အစာမကြေဆေးခန်းသွား လိုက်ရသေးတယ်။ ကိုယ်ကတော့ သေချာတော့ဆေးမိပါတယ်။ ပန်းဂေါ်ဖီကပဲဆေးပါတာ လား။ အဆင်မသင့်လို့ဖြစ်သွားတာပါ။ အဲဒါလေးကတော့မှတ်မှတ်ရရပါပဲ။ ပိန်နည်းဆိုလည်း မှတ်ပြီးလိုက်လုပ်ပေါ့။ ကျမတကယ့်ကို နှစ်သက်စွာနဲ့အားပေးတဲ့ Site လေးပါပဲ။
အဲဒါနဲ့စကားမစပ် သူကြီးမင်းရဲ့နာမည်က Kai ဆိုတာ မြန်မာလိုဘယ်လိုအသံထွက်ရလဲ
ကိုင် or ကိုင်း?….သူကြီးမင်းကိုနောက်ဆုံးမှမေးမိလို့ စိတ်မရှိပါနဲ့နော်။
ဖယား ဖယား …..
ကိုကိုကြောင်တို့ ဦးနိုတို့ ပြောတာတော့ .. သဂျီးက deep throat တဲ့ ..
သတိကြီးစွာထားပီး ချဉ်းကပ်ပါ ခေးရယ်…
စိုးတယ် ..စိုးမိတယ် ..စိုးထိတ်မိတော့တယ်…
kai ကို ခိုင် လို့ အသံထွက်တဲ့အကြောင်း သူကြီးမင်းက သေချာရှင်းပြခဲ့ဖူးပါတယ် … မြန်မာပြည်မှာ စာလုံးပေါင်းနေတဲ့ နံမည်နဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေဟာ တလွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတောင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသေးတယ် …
ကျေးဇူးပါမမ။ ကျမက အဲဒီပိုစ့်လေးကိုမဖတ်လိုက်မိဘူး။ အဲဒါကြောင့်မေးလိုက်မိတာပါ။
U Chaves တကယ့်ကိုသဘောရိုးနဲ့မေးလိုက်မိတာပါ။
မခိုင်၊ Jujuma နဲ့ ဦးဗိုက်
ညီမနာမည်လည်း ပြောင်းရမယ်။ အမည်သတ်ပုံပြောင်းပွဲလုပ်ရတော့မယ်။
အော် သွားချီးနံမည်က Kai ခိုင်လား သိပါဘူး ကိုင်မှတ်လို့ ……… ဒါဆို ညီမလေးခရစ်ရေ……..မမနံမည်စာလုံးပေါင်းပြောင်းလိုက်ပါတယ်ကွယ် Kai Kai ပါတဲ့ …… အဟိ…….
ဟစ်ဖော့ အဆိုဒေါ် စိုင်းစိုင်း ဟာ သူ့ နာမည်ကို Sai Sai ဟုပေါင်းသောကြောင့်
သဂျီးနာမည် အမှန်ကား ကိုင်း ပင်ဖြစ်ချေတော့သည်
ယနေ့ မှစ၍ သဂျီးမင်းအား အူးကိုင်း ဟူ၍ ခေါ်တွင်ကြပါကုန်
မီးလေးလိုပဲ အတိုလဲ ရွာသကြီး အူးခိုင် ကို ကွိုင်လို့ မှားခေါ်ခဲ့ဖူးတရ်…
ရွာပညာရှိ ဆြာ့ဂီ့က KAI ပို့စ်တင်မှ နည်းနည်း နားရှင်းသွားဒယ်…
အရမ်း ဖြူစင်တဲ့ မီးလေး ခရစ်စတယ်ရိုင်းကို ရွာထဲမှာ မျက်စိလည်နေပြီး
အော်မေ့ဂိုဏ်းထဲရောက်သွားမှာ… စိုးတယ်… စိုးမိတယ်… စိုးလွန်းမိတယ်…
တရုတ်မ ကြိုက် ပါတီ . . နှူးဘာပါတီ နှင့် အမျိုးသမီးရေးရာ ပါတီတို့မှ အပြိုင်အဆိုင် မဲဆွယ်နေကြပါကြောင်း …
စိုးမိတယ် စိုးမိတယ် …
စကားမစပ် …. ရွာသူဆိုတော့ …. မှော်ဆရာနဲ့ နဲနဲ လိုင်းတူတယ်နော် …
ကိုရင်စည်သူ နဲ့ ဦးမှော်ဆရာ
ရွာသူအသစ်ကလေးလည်း ပါတီတွေရဲ့ အားနည်းချက် အားသာချက်တွေကို သေသေချာချာ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ပြီး အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့ လေ့လာနေပါတယ်နော်
အမ က စာရေးလဲပျင်း ..စာဖတ်လဲပျင်းတယ်ဆိုတော့
အမှန် က “ကိုင်ဇာ” ကို အားကျလို့ တဲ့။ မသိမသာ တူအောင် မှည့်ထားတာ။
Kai Pronunciation Keye
The name Kai (play /ˈkaɪ/) has various origins and meanings in different cultures:
In Basque, Kai isacommon word meaning “pier ofaharbour” andavariant of the first name Kaio (from the old Latin name Caius)
In Burmese, Kai means “strong”, or “unbreakable”
In Chinese, Kai isagiven name which can be one of several characters. The most common Cantonese name is “繼” with five radicals for silkworms on sieve, meaning “unceasing (like silk)” or “following intimately (like silk)” or “continual (like silk)”. The most common Mandarin name, “凱”， meaning “victory” or “triumphant”.
အဲဒီထဲ က မြန်မာ လို Kai ဆိုတဲ့ နာမည်ကို သူကြီး ဖြည့်ထားတာ။ သူဟာသူ ကမ္ဘာသိအောင် မွှန်းရတာပေါ့ကွယ်။
သူကြီးကသူ့နာမည်ကို သေသေချာချာ စွယ်စုံကျမ်းမွှေပြီးပေးထားတာပဲနော်
ညီမလေးရေ မင်္ဂလာပါ ။ နှုတ်ဆက်တာ နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်။
ပျော်ကြမယ်။ အော်ကြမယ် ။ ငြင်းကြမယ် ။
ရွာသူ(စုန်း) မိတ်ဆက်ထင်လို့အကူအညီရပြီဆိုပြီးဝင်လိုက်တာဗျ… ၀င်ကြည့်လိုက်တော့မှ အခုမှရွာထဲဝင်လာတဲ့ စာရေးဆရာ(ကဝေမ)ကြီးပါလား။ ကြိုဆိုတယ်ဗျာ… အဆင့်မရှိတဲ့ကျွန်တော် ကြိုဆိုလို့ ၀မ်းမနည်းလောက်ဘူးထင်ပါတယ်ဗျာ… နော… ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးမိတ်ဆက် ထားတော့ ဆက်ပြီးလာမယ့် post တွေကို မျှော်နေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးထဲ ကျွန်တော်ပါကြောင်းပြန်မိတ်ဆက်တာပါ… (ဝေဖန်လေကန်ဖို့)
ကိုကောင်းမြတ်သူပြောတာက ကဝေတွေဘာတွေ ပါလာပါလား။ကြောက်လှပီ။
ကြိုက်သလိုတွေး ကြိုက်သလိုရေး အဲဒါမန်းလေးဂေဇက်ရွာပါဘဲ။.
အချုပ်ဆိုရရင် ကျုပ်တို့ရွာက ပျော်စရာကောင်းပါ၏။
အင်မတန် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အဓိက အမှာစကားလေးပဲ
Hi, morning Lay Lay…ကြိုဆိုအားပေးတာကျေးဇူးပါ
Pooch, KMThu, – – – – – ချစ်သူ တို့ ကျန်းမာပါစ..
ခိုင်နဲ့ဦးကြောင်တို့ဂ ဟိုဒင်း ဟိုဟာ ဟိုဥစ္စာဒွေ…။
ပန်းခရမ်းပြာရေ တခါတရံမှာ အိမ်မက်လို…..။
မှတ်ချက်။။ လူသူလေးပါး ကင်းမဲ့ရာ ကျွန်းတကျွန်းပေါ်သို့ သင်္ဘောပျက်၍ ရောက်ခဲ့စဉ် ခိုင်နှင့်ကြောင် နှစ်ဦးသား အမှတ်တယ)
Crystal ရေ Rose ကလည်း ကြိုဆိုပါတယ်နော်။ မတူညီ တဲ့ အရပ် မတူညီတဲ့ နေရာကနေ မတူညီ တဲ့ အတွေ့ ကြုံတွေ idea တွေနဲ့ sharing လုပ်မှာဆိုတော့ ရွာသူ ရွာသား အသစ် တစ်ယောက်တိုးတိုင်း တိုးတိုင်း ဘ၀မှာ အတွေ့ အကြုံ အသစ်၊ ဗဟုသုတ အသစ် တစ်ခုတစ်ခု ထပ်ရမယ်မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ခရစ်လေး ကိုယ့်ကိုတော့ ပေ လို့ တစ်လုံးထဲခေါ်ရင် ကိုကြီး မင်္ဂလာ ရှိရှိ လက်ခံပါတယ်ကွယ်။
နဖူးကြီးမှ အားမနာ ပေ ဆိုဘဲ
ခလေးပီပီ ကိုဆာ့ ပဲလှော် ဝါးနေစမ်းပါအေ
မင်္ဂလာပါ ကျောင်းအမကြီး ခင်ဗျား….
အမကြီးရဲ့ ဒုတိယစာမျက်နှာကျမှ နှတ်ဆက်နိူင်တာကို ခွင့်လွှတ်ပါ ခင်ဗျား။အမကြီးရဲ့ စာအရေးသားဟာဖြင့် ကျနော်နဲ့ အပုံကြီးကွာခြား ကောင်းမွန်နေသဖြင့် လေးစားအပ်ပါတယ်ဗျ။စကားမစပ် အကျွန်တို့ ရွာသူကြီးဟာဖြင့် အဘယ်မှာများ အလုပ်များနေရော့ထင် ကျောင်းအမကို မနှတ်ဆက်ပါလား….
သူရာအသောက်ကြူးသူရရဲစည် လူမူးထူးချွန် ပထမအဆင့်